सेनापतिले भारतीय राजदूत बाट गिफ्ट लिनु ठिक हो त ? – www.agnijwala.com
सेनापतिले भारतीय राजदूत बाट गिफ्ट लिनु ठिक हो त ?
घोडाजात्राको अघिल्लो दिन एउटा गज्जबको फोटो हेर्न पाइयो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री लिँदै थिए। दिँदै थिए भारतीय राजदूतराजदूत मन्जीव सिंह पुरी। पुरीको हातमा घोडाको लगाम थियो। उनले त्यो लगाम प्रधान सेनापतिलाई बुझाउँदै थिए। सेनाले पठाएको विज्ञप्ति अनुसार यी घोडाघोडीहरु नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले सहयोग स्वरुप दिएको हो। भारतीय सेनाले दिएको भनिए पनि त्यहाँ भारतीय सेनाका प्रतिनिधि हैन भारतीय राजदूत देखिए। नेपाली सेनाका पनि प्रधान सेनापति जस्तो शीर्ष व्यक्ति नै उपस्थित हुनु जरुरी थियो कि थिएन घोडा बुझ्ने कार्यक्रममा, शायद सरकारले मूल्याङ्कन गर्ला। धन्न कसो रक्षामन्त्री नै उपस्थित भएर बुझेनछन्।
лояльность потребителейобслуживание web сайтаkazan mosquephotosиндексации страницы поисковыми системамиплатье под высокие сапоги фото